Xaawa iyo Caagadii Lucozade ee Inankeedu Sitay – Kobciye
Xaawa waa hooyo keligeed qurbaha ku soo korisay lix carruur ah. Carruurta aabahood dhawrkii sannadood mar ayuu soo gaadhaa, wuxuuna la joogaa ilaa saddex toddobaad, waayo wuxuu deganyahay oo uu ka midyahay siyaasiyiinta Soomaalida ee Geeska Afrika isaga dabqaada. Haddiiuu saddex toddobaad ka badan UK joogo telefoonkiisu ma joogsado, waxaana hadh iyo habeen la soo hadasha minyaradiisoo dhowr carruur ah u haysa.
Laakiin Xaawa waxaad moodaa in ay dhexda u xidhatay sidii ay lixdeeda carruur ah u korin lahayd, uguna shaqayn lahayd. Runtii Ilaahay dedaalkeeda wuu la garab qabtay inkasta oo inamadeedii mid ka mid ahi uu ka dhego-adaygay oo maalmahan dambe socodkiisii batay. Habeen kasta way sugtaa oo ma seexato ilaa uu soo hoyanayo. Habeennada qaarkood wuxuu yimaaddaa ilaa saddexda aroornimo (3:00 am).
Marmarka uu sidaa u raago haddii ay telefoonka ka wacdo, wuu ku xanaaqaa oo wuu canaantaa. Taasi na waxay ku qasabtay in ay iska sugto oo ay habeen walba u ducayso, Ilaahay na ka barido in isaga oo caafimaad qaba uu soo hoydo – xitaa heer waxay gaadhay marka ay sanqadh dibedda ka maqasho ama baabuurka booliska qayladiisa meel dheer ka maqasho ay istidhaahdo isagii ayaa wax noqday oo ay naxdin iyo werwer joogto ah ku noolaato. Habeen habeennada ka mid ah ayaa inanteedii Caasha oo hablaha u weynayd oo la socotay isbedelka hooyadeed ku dhacay iyo werwerka ay hooyadeed ku nooshahay, kana biqi jirtay in ay caafimaad darro dhinaca maskaxda ah ka qaaddo, waxay go’aansatay in ay hooyadeed dareensiiso waxa uu inankeedu ku raago waayo haddii ay si toos ah ugu sheegto waxay ogayd in aanay rumaysanaynin.
Caasha waxay ku tidhi: “Hooyo habeen walba inankaaga ilaa saqdadhexe ayaad sugtaa, anagana waxaad mar walba na weydiisaa cidda uu maalmahan dambe raaco iyo waxa uu dariiqa ka qabto.” Waxay na iyadoo aan hadalkeeda hakinin weydiisay su’aalahan soo socda: “Horta marna ma isweydiisay waxa ku jira caagadahan ay isaga iyo asxaabtiisu laalaadiyaan marka ay dariiqa marayaan? Weli adiga iyo hooyooyinka aad asxaabta tihiin ma u fiirsateen waxa ku jira caagadahan aad maalin walba aragtaan iyagoo inamada Soomaalidu laalaadinaya marka ay suuqa joogaan ama ay makhaayadaha hortooda taaganyihiin? Habeen walba waxaad inankaaga albaabka ka furtaa isagoo caagad Lucozade ama Orange ah sita, haddaba ma isweydiisay sababta uu habeen walba u sito?” Kadib markii ay saddexdaa su’aalood weydiisay inantii qolkeedii ayay iska gashay, laakiin hooyadeed qolkii fadhiga ayay ku sii nagaaday waayo ma seexato ilaa inankeeda Cali Cadde uu soo hoydo. Caawa se waxa maskaxdeeda
ka dhex-guuxaya su’aalihii ay inanteedu weydiisay.
Dhawr saacadood kadib ayay inankii albaabka ka furtay – waa ilaa labadii aroornimo (2:00 am). Islamarkiiba isagoo aan xitaa salaamin ayuu qolkiisii abbaaray, albaabakana soo ceshaday. Iyaduna sidii caadada u ahayd ayay sariirteedii tagtay.Habeenkaa may gam’in. Waxay galgalato ee ay marba dhinac isku rogto, goorsheegtadu markay ahayd ilaa afartii-iyo-badhkii subaxnimo (4:30am) ayay si shanqadh la’aan ah u gashay qolkii uu inankeedu hurday, waxayna aragtay laba caagadood oo Lucozade ah oo sariirtiisa agyaalay, wayna soo qaadatay, albaabkiina aayar bay u soo celisay. Markii ay qolkeeda ku noqotay ayay caagadihii furtay si ay u ogaato waxa ku jira iyo inay jawaabo u hesho su’aalihii ay inanteedu isweydiisay, InanteediiCaasha iyo carruurtii laba ka mid ah ayaa jugtii baxday darteed hurdadii ka soo booday, waxayna arkeen hooyadood oo albaabka agtiisa jiifta oo suuxsan. Waxay markii ba fahmeen in jugtii iyo sanqadhii ay ku tooseen ay ahayd hooyadood oo salaanka ka soo dhacday, kadib na dhooligii caafimaadka degdegga ah (ambulance) ayay ugu waceen.
Xaliima waxay indhaha kala qaaday iyadoo nin dhar cad xidhani uu dul taaganyahay oo uu su’aalo weydiinayo oo uu ku leeyahay “Sidee baad salaanka guriga uga soo dhacday? Maxaadse qabanaysay?” yidhaahdeen malaha way masayrtay waayo ninkeedii ayaa gabadh saddexaad guursaday. Si kastaba ha ahaatee dadkii wanaageeda, dhawrsanaanteeda iyo ixtiraamkeeda yaqaanay markii ay sheekada u kuurgaleen waxay isweydiiyeen oo ay jawaabo u waayeen labadan su’aalood: “Caagada ay Xaawa cabtay maxaa ku jiray? Inantu miyay ku saxsanayd in ay hooyadeed sidaa wax u weydiiso, mise waxa ka fiicnayd in ay si toos ah wax ugu sheegto?”
La soco qaybta 2aa
KHALID AND HIS COLLEAGUES HAVE SET UP A SOMALI BILINGUAL MAGAZINE IN BRISTOL